लेखक: एलेना फेयरली
ब्राउन बोइ प्रोजेक्टमा Lending Circles
Elena Fairley मा डिसेम्बर 2, 2016 द्वारा लिखित।
र Credit्गको LGBTQ समुदायहरूमा बिल्डिंग क्रेडिट र विश्वास
कार्लाको उधारो घेरामा पहिलो अनुभव उनी ब्राउन बोइ प्रोजेक्टमा काम गर्न थाल्नु भन्दा धेरै अघि आई, र उनले एमएएफको बारेमा सुनेकी थिइनन्। उनीले उनलाई "कन्डिनास" भनेर चिन्थिन् र उनले पहिलो पटक लस एन्जलसको कपडा कारखानामा भेट गरिन जहाँ उनले सुरु गरे। एक किशोरको रूपमा काम गर्दै।
उनी र उनका सहकर्मीहरूले पैसा बचतमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न कन्डिना गठन गरे। तिनीहरू सबै $100 को साप्ताहिक योगदान गर्न सहमत भए।
बचत गर्न यो सजिलो रकम थिएन। कार्लाले ओभरटाइम काम गर्छिन् सुनिश्चित गर्न कि उनले प्रत्येक भुक्तानी गर्न सक्छिन्। अन्तमा, उनले मेक्सिकोको यात्राको लागि कन्डिनामार्फत पर्याप्त पैसा बचत गरे, जहाँ उनका धेरैजसो परिवार बस्ने गर्थे।
कार्लाले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य उनको शिक्षालाई जारी राख्ने थियो भन्ने कुरा थाहा पाएर कारखानामा काम लिएकी थिइन, र चाँडै उनी स्थानीय सामुदायिक कलेजमा राती कक्षामा भर्ना भए।
पैसा कडा थियो, र कक्षाहरू महँगो थियो, त्यसैले उनले आफ्नो अध्ययनको लागि ठूलो debtण लिए। उनीले महसुस गरेकी थिइन कि उनले आर्थिक सहायताका लागि योग्य हुन सक्छन।
पढाइ सुरु गरेको केही समयपछि नै कार्लाको काममा पीठोमा चोट लागेको छ। उनका रोजगारदाताहरूले उनलाई घण्टा दिन छोडे, र अन्ततः उनी अशक्त हुन गइन् र पूर्ण-समय विद्यार्थी भएकी छिन्। उनी यूसी सान्ता क्रुजमा सरुवा गरियो र एक प्राध्यापकले उनलाई आर्थिक सहायताको लागि आवेदन दिन सहयोग गरे। कार्ला उनको नारीवादी अध्ययन र समाजशास्त्र मा पाठ्यक्रम प्रेम गर्थे, तर उनको बढ्दो debtण को बोझ पृष्ठभूमि मा कम भयो। उनले debtण सors्कलनकर्ताहरूको कल स्किर्टि began गर्न थाले। उनले वर्षौंदेखि यसरी नै स्क्र्याप गरिन्।
उनी debtणमा गहिरो घुमाउँछिन्। उनको credit२० को क्रेडीट स्कोर pl०० भन्दा कम डुब्दै छ।
Cundinas बाट Lending Circles मा
कलेजबाट स्नातक पछि, कार्लाको साथ एउटा कामको उद्घाटन घोषणा भयो ब्राउन बोई परियोजना, एक ओकल्यान्ड गैर नाफामूलक जसले पुरुषत्वको केन्द्र केन्द्र महिला, पुरुषहरू, दुई-आत्मिक व्यक्तिहरू, ट्रान्समेन र सहयोगीहरूलाई सँगै लि about्गको बारेमा र talk्गका समुदायहरूको तरीका परिवर्तन गर्न ल्याउँदछ।
उनी तुरुन्त जान्थिन् - यो काम उनको लागि थियो। ब्राउन बोईको मिशन र मानहरूले उनको आफ्नै पहिचान र अनुभवको प्रतिध्वनित गर्‍यो। उनले कुनै हिचकिचाहट बिना आवेदन दिए। प्रतिस्पर्धा खडा थियो, 80० भन्दा बढी आवेदकहरू यस पदका लागि आन्दोलन गर्दै। तर कार्ला उनको भूमिकाको लागि ठीक थियो। उनी बताउँछिन्, उनी र ब्राउन बोईका कर्मचारीहरू "यसलाई राम्रोसँग लात हान्छन्।"
उनी आफ्नो सपनाको काममा उत्रिन्। तर उनको debtण र क्षतिग्रस्त क्रेडिट उनको सीमित गर्न जारी।
उनी ओकल्याण्डमा आवास खोज्न सled्घर्ष गर्छिन् जसले उनको कम क्रेडिट स्कोर स्वीकार्नेछ। भाग्यवस, कार्लाको एउटा साथी थियो जसले उसलाई अपार्टमेन्ट पाउन मद्दत गर्‍यो। तर एक क्रेडिट कार्ड बिना, त्यो आफ्नो नयाँ घर प्रस्तुत गर्न सक्दैन।
“ती सबै चीजहरू भावनात्मक हिसाबले र तनावपूर्ण हुन्छन्। म निराश थिएँ। तपाईंको क्रेडिट स्कोर लगभग तपाईंको आफ्नै मूल्य संग जोडिएको महसुस गर्न सक्दछ। ”
यो ब्राउन बोईमा थियो कि कार्लाले Lending Circles प्रोग्रामको बारेमा थाहा पाए जुन MAF प्रबन्धन गर्दछ। उनी कन्डिनासको बारेमा उनको पहिलेको अनुभवबाट अवधारणासँग परिचित थिए। सहभागिताको माध्यमबाट उनको क्रेडिट स्कोर सुधार गर्ने वाचाले उनको भावनालाई उचाल्‍न लाग्यो - उनले आफ्नो जीवनको debtण द्वारा नियन्त्रण नगरेको खण्डमा महसुस हुने राहतको कल्पना गर्न थालिन्, उनका विकल्पहरू अब उनको क्रेडिट स्कोरले घटाइनन्। धेरै वर्षको आर्थिक बहिष्कार पछि, कार्लाले सराहना गर्‍यो कि उनको क्रेडिट स्कोरको परवाह नगरी Lending Circles उनको लागि खुला थियो।
कार्लाले उही अनुशासन र समर्पणलाई उनको लेन्डि C सर्कलमा ल्याई जुन उनले कन्डिनामा धेरै वर्ष अघि ल्याएको थियो। ब्राउन बोई पछि एक आधिकारिक Lending Circles प्रदायक बने, कार्लाले कार्यक्रमको लागि प्रमुख स्टाफ आयोजक बन्ने अवसरको फाइदा उठायो।
कार्लाले 100% समयमा भुक्तानको साथ उनको लेन्डिंग सर्कल समाप्त गर्‍यो। उनले आफ्नो downण तिरेको थियो र बचतहरू निर्माणमा पनि व्यवस्थापन गरिन्।
तर उनको उत्तम ट्र्याक रेकर्डको बावजुद, उनी आफ्नो क्रेडिट स्कोर जाँच गर्न घबराइन्। उनी निराश, निरुत्साहित र अठोटिएको महसुसको साथ क्रेडिट स्कोरको बराबरी गर्न आईन्।
लेन्डिंग सर्कल समाप्त भए पछि लगभग एक महिनाको लागि, कार्लाले उनको क्रेडिट जाँच गर्न ढिलाइ गर्‍यो। उही महिना कार्लाले आफ्नो लेन्डि C सर्कल पूरा गर्छिन्, उनलाई ह्वाइट हाउसमा रंगका आविष्कारकहरूका लागि शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आमन्त्रित गरियो। उनले आफैंले सूट शपिंग लिईन्, यस तथ्यबाट सान्त्वना पाइन् कि अहिले उनीहरुसंग पर्याप्त खर्च बाँकी छ।
कार्लाले उत्तम पोशाक फेला पारे: रातो टाईको साथ खैरो सूट। रेजिस्टरमा, क्यासियरले उनलाई स्टोर क्रेडिट कार्डको लागि आवेदन दिए। कार्ला यी प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्न अभ्यस्त थिइन्, किनभने उनी योग्य हुन नसक्ने गरी। तर यस पटक, उनले आवेदन दिए।
र उनको स्तब्धमा उनी योग्य छिन्।
“मैले १टीपी २ टी limit०० सीमामा योग्य भएँ! म सुपर चकित भएँ। मैले भने, प्रतीक्षा गर्नुहोस् ... के? म योग्य छु ?! "
यस खबरले खुशी गरी, कार्लाले अन्ततः आफूलाई क्रेडिट स्कोर जाँच गर्न आफैलाई धकेली। उनले जाँच गरी: यो १०० अंक बढेर 650० मा पुगेको थियो।
उनीले स्टोर क्रेडिट कार्ड भुक्तान गरी र फरक कार्डको लागि आवेदन गरे जसले एयरलाइन्स माईलहरू प्रस्ताव राख्छिन्। फेरि, उनी अनुमोदित भएकी थिइन - यस पटक १TP2T5000 सीमाको लागि। उनको अर्को लक्ष्य उनको आमा अर्को वर्ष युरोप उडान गर्न पर्याप्त पैसा बचाउनु छ।
भविष्य कस्तो छ
वित्तीय स्थिरताले जीवनप्रति कार्लाको दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छ।
"म वास्तविक हुँ," उनी भन्छिन्। "म राम्रो महसुस गर्छु। आपतकालिन अवस्थामा मसँग एक क्रेडिट कार्ड छ। जब मलाई पैसा चाहिन्छ, त्यहि हुन्छ भनेर मलाई थाहा छैन। उनी थप्छिन्, "म धेरै चिन्तित भएको महसुस गर्दछु, जस्तो मेरो जीवन फेरि सँगै आउँदैछ।"
कार्ला अधिक Lending Circles सुरु गर्ने र LGBTQ समुदायमा र color्गका मानिससँग वित्तीय बहिष्करणको बारेमा अधिक खुला कुराकानीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने बारेमा उत्साहित महसुस गर्दछ:
"त्यहाँ धेरै लाज छ। हाम्रो समुदायमा वित्तीय स about्घर्षको बारेमा कुरा गर्नु अक्सर वर्जित छ ... कहिलेकाँही हामी लाग्छौं कि हामीसँग यस प्रकारका समस्याहरू छैनन्, तर हामी गर्छौं। "
उनी अब आफ्नो क्रेडिट सीमाको २1१टीपी १ टी अन्तर्गत उनको खर्च राख्छिन् र हरेक महिना उनको कार्डको पूर्ण ब्यालेन्स भुक्तान गर्छिन्। यी सीपहरू व्यावहारिक छन्, तर उनीहरूको कार्लाको लागि ठूलो महत्व छ। उनी वित्तीय शिक्षालाई आर्थिक प्रणालीमा महारत हासिल गर्ने शक्तिशाली तरीकाको रूपमा देख्छिन् जसले प्रायः रंग र LGBTQ समुदायका सदस्यहरूलाई वेवास्ता गर्छन् र बेफाइदा गर्छन्।
“कसैले पनि हामीलाई यो खेल कसरी खेल्ने भनेर सिकाएको छैन,” कार्ला बताउँछिन्। "तर वित्तीय शिक्षा मोड्युलको साथ, हामी नियमहरू सिक्छौं।"
समुदायको शक्ति: AAPI आप्रवासीहरूका लागि अवसरहरूको विस्तार गर्दै
Elena Fairley मा मे 20, 2016 द्वारा लिखित।
गैर नाफामुखी समुदायले देश भर एशियन अमेरिकी र प्रशान्त टापु (AAPI) आप्रवासीहरूको वित्तीय क्षमता निर्माण गर्दैछ।
जब तपाईं परिवार, साथीहरू, र छिमेकीहरू एक अर्कालाई उनीहरूको साझा वित्तीय सपनाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नका लागि एकसाथ ल्याउनुहुन्छ, तपाईं समुदायको शक्ति लाभ उठाउँदै हुनुहुन्छ। पारिवारिक वा सामाजिक समूहहरूमा ndingण दिने र Thisण लिने यो अभ्यास - यो अभ्यास जसले प्रेरित गर्यो Lending Circles कार्यक्रम - संसारभरि समुदायहरूमा सामान्य छ।
तिनीहरूको कोरमा, Lending Circles समुदायको बारेमा हो।
आज, हामी विशेष गरी एउटा हाइलाइट गर्दैछौं: एसियाली अमेरिकी र प्रशान्त टापु (AAPI) अमेरिकाभर आप्रवासीहरूलाई Lending Circles प्रदान गर्ने साझेदारहरूको अद्वितीय समूह। फिलिपिन्समा, अभ्यास को रूपमा उल्लेख छ पलुवागन; चीनको केहि भागहरूमा यसलाई भनिन्छ हुई। यी जस्तो परम्पराहरूबाट आकर्षित गर्न, धेरै AAPI आप्रवासीहरू Lending Circles बचत र क्रेडिट को एक स्रोतको रूपमा परिचित छन्।
एशियाका धेरै भागहरूमा, Lending Circles एक पुरानो परम्परा हो।
के प्रायः अपरिचित छ अमेरिकाको आगमनमा पत्ता लगाएको जटिल वित्तीय बजार हो। यो वास्तविक मूल्यमा आउँछ: १०१ एटीआईपीआईआईपीआईटीआईको बैंक खाता छैन र धेरै "अन्डरबान्ड्ड" छन्, जसको अर्थ उनीहरूले पेडडे ndणदाताहरू र चेक क्याशरहरू जस्ता वित्तीय सेवाहरू पाल्नु पर्छ। यस अनुसार FDIC को २०१ Un सर्वेक्षण अनबेन्क र अन्डरबन्क परिवारहरू, एशियाई अमेरिकाहरूको १ 1 १TP1T र प्यासिफिक टापुका २1१ टीटी १ टी तिनीहरूको वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न फ्रिज सेवाहरूमा जान्छन्।
आधुनिक वित्तीय बजार र सांस्कृतिक परम्पराहरू बीचको दूरी हटाउन पलुवागन र हुई, हामी ATPI समुदायहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न Lending Circles अनुकूल गर्न सक्दछौं।
हामी AAPI आप्रवासीहरू उनीहरूको सर्तहरूमा छन्, भेटेर शुरू गर्न सक्दछौं।
यस भावनामा हामी सात एशियाई भाषाहरूमा चिनियाँ, बर्मी, नेपाली, भियतनामी, कोरियाली, बंगाली, र हमोंगमा loanण सम्झौता प्रस्ताव गर्दछौं। तर यो केवल एक सुरुवात हो। हामी खुला स्रोत समाधान पनि गर्न सक्दछौं - ताकि अन्य गैर-नाफामुखी संस्थाले स्यान फ्रांसिस्कोमा हामीले सिकेका पाठहरूमा निर्माण गर्न सक्दछौं र तिनीहरूलाई देशभरिका शहरहरूमा लैजान सक्छ।
कुनै दुई समुदाय एक समान छैनन्। र स्थानीय संगठनहरू राम्रा जान्दछन् कसरी उनीहरूका ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सेवाहरू ह्यान्डक्राफ्ट गर्ने।
त्यसकारण देशभरि गैर नाफामुखी मानिसहरु लाई आफ्नो समुदायहरुमा Lending Circles कस्टम उचित छ।
उदाहरणका लागि एशियन सेवाहरू एक्शनमा लिनुहोस् (ASIA)। क्लिभल्याण्ड, OH मा यस Lending Circles प्रदायकले नेपाली र बर्मी आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जस मध्ये धेरैले क्रेडिट स्कोरको अवधारणा सामना गर्दैनन् जबसम्म तिनीहरू कार किन्न, घर भाँडा लिन वा सुरू गर्न तयार हुँदैनन्। एउटा व्यवसाय
Lending Circles को माध्यमबाट, यी ग्राहकहरूले आफ्नो मातृभाषा बोल्ने व्यक्तिहरू creditण लिनमा सक्षम छन् - अक्सर उनीहरूका साथीहरू र छिमेकीहरू। यो आपसी समर्थन को प्रणाली सुरक्षा को भावना प्रदान गर्दछ कि अन्य modelsण मोडेलहरु को अलावा Lending Circles सेट गर्दछ। यसले शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा नयाँ समुदाय बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ उनीहरूको घर छोडे पछि।
चिनियाँ कम्युनिटी सेन्टर (सीसीसी) का लुसी प्याट भन्छन्, “लेन्डि C सर्कलको मोडल बुझाउँदा म हाम्रा ग्राहकहरूको आँखा ज्योति भएको देख्न चाहन्छु।
"'हो, हामीलाई थाहा छ!' तिनीहरू प्रायः जवाफ दिन्छन्। ” लुसीका धेरै ग्राहकहरू १ टीटी T टी को अवधारणासँग गहिरो परिचित छन्: "उनीहरूले परिवार र साथीहरूसँग धेरै बर्षसम्म अनौपचारिक रूपमा भाग लिएका छन् र उनीहरूले आफूले पहिले नै विश्वास गरेको उत्पादन पाउन सकेकोमा ढुक्क महसुस गर्छन्। तिनीहरू आफ्नो विरासत, र वित्तीय सुरक्षा को मोडेल सम्मान गरिएको छ कि लाग्छ। यो उनीहरूको लागि ठूलो पुल हो। ”
उनीहरूको परम्परामा कोरेर र उनीहरूको आवश्यकतालाई अनुकूल बनाउँदै, Lending Circles ले सामर्थ्य आफैंको हातमा राख्यो। एएसआईए र सीसीसी जस्ता संगठनहरूसँगको हाम्रो साझेदारी वास्तविक ईन्जिन हो जसले १टीपी T टीको सफलतालाई शक्ति प्रदान गर्दछ, ताकि स्थानीय नेताहरूले स्थानीय समाधानहरू सिर्जना गर्न सकून्।
यो सबै MAF र राष्ट्रीय CAPACD बीचको सहकार्यबाट सुरू भयो।
राष्ट्रिय CAPACD कम आय AAPIs को लागि जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न एक मिशन मा एक वकिल समूह हो। दुई वर्ष अघि, MAF आठ AAPI सेवारत संगठनहरूको साथ वित्तीय क्षमता परियोजना शुरू गर्न राष्ट्रिय CAPACD का साथ सेनामा सामेल भयो:
कोरियाली स्रोत केन्द्र (लस एन्जलस, CA)
चिनियाँ अमेरिकी सेवा लिग (शिकागो, IL)
चिनियाँ समुदाय केन्द्र (हस्टन, TX)
छाया CDC (ज्याक्सन हाइट्स, न्यूयोर्क)
हवाई समुदाय सम्पत्ति (होनोलुलु, HI)
एशियाई आर्थिक विकास एजेन्सी (सेन्ट पल, MN)
एशियाई सेवाहरू कार्यमा (क्लीभल्याण्ड, ओएच)
पान एशियाई समुदाय सेवाहरूको लागि केन्द्र (एट्लान्टा, GA)
सँगै मिलेर हामी एक प्रश्नको उत्तर दिन शुरु गर्दछौं: के हामी सामुदायिक संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेका विद्यमान आप्रवासन संसाधनहरूमा १ टीटी T टी र वित्तीय शिक्षालाई समावेश गरेर नयाँ आप्रवासीहरूको वित्तीय क्षमता बढाउन सक्छौं? हाम्रा नयाँ साझेदारहरूले परम्परागत सेवाहरू जस्तै विवाह वर्ग, नागरिकता शिक्षा, र हाम्रो नवीन Lending Circles कार्यक्रम र वित्तीय कोचिंगको साथ वर्कफोर्स प्रशिक्षणसँग विवाह गर्न शुरू गरे।
मात्र दुई वर्षमा, राष्ट्रिय CAPACD समूहले 1 56 1 १TP4T गठन गरेको छ, जसमा। 34 participants सहभागीहरू छन्।
यो आश्चर्यजनक छ कि यी सहभागीहरूले TPण मात्रा मा $150,000 भन्दा बढी राम्रो उत्पादन गरेका छन्, सबै आफ्ना साथीहरूसँग ndingण दिने र fromण लिनेबाट। र पुन: भुक्तानी दर आश्चर्यजनक रूपमा उच्च छ - 1 99१TP1T भन्दा बढि। यसको मतलव सहभागीहरूले जाँच खाताहरू खोल्दै, क्रेडिट स्कोरहरू स्थापना गर्दै, र पहिलो पटक वित्तीय मुख्यधारमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
केही अपार्टमेन्ट भाँडामा लिन सक्षम छन्। अरूले Lending Circles प्रयोग गरेका छन् नयाँ देशमा साथीहरूको समर्थनको स्रोत। र धेरै महिलाहरु जो अमेरिका गएका छन् आफ्नो पतिहरुमा सम्मिलित हुन, Lending Circles ले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
दुई बर्ष सफलताहरु पछि, हामी AAPI को सेवा प्रदान गर्ने संगठनहरु को यो प्रभावशाली समूह संग काम गर्न उत्साहित छौं।
हाम्रो साझेदारहरूको गहिरो लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् Lending Circles कार्यक्रमहरू र तिनीहरूलाई अझ कडा परिश्रम गर्ने आप्रवासीहरूमा देशभरि ल्याउनुहोस्। र हामीसंग हाम्रो अनलाइन "Lending Circles समुदायहरू" ज्ञान-साझेदारी प्लेटफर्म जस्तै, नयाँ सम्बन्धहरू बनाएर र साझेदार सहयोगको लागि हाम्रा उपकरणहरू सुधार गरेर हाम्रो नेटवर्कलाई सुदृढ गर्ने हाम्रो आफ्नै योजनाहरू छन्।
हामीलाई थाहा छ कि सफलताको कुञ्जी समुदायको शक्तिमा निहित छ। यसैले हामी हाम्रो साझेदारहरूसँग मिलेर हाम्रा Lending Circles ग्राहकहरूको लागि अझ शक्तिशाली संसाधनहरू निर्माण गर्न कार्य गरिरहेका छौं - जो एक अर्काको विकासलाई समर्थन गर्न सँगै मिलेर काम गर्दछन्।